Masih soo socda: Calaamadaha 'Todoba' - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Marar badan Quraanka kariimka ah, waxaynu ku aragnaa in Eebe todobada wareegyo ku isticmaalo. Tusaale ahaan, suuradda at-Talaq (Suuradda 65 – Furriinka) ayaa sheegaysa
Eebana waa kan abuuray Todobo Sarrood, Dhulkana wax lamid ah. (65) wuxuu ku soo degaa dhexdooda amarkiisa, inaad ogaataan in Eebe wax walba karo, wax walbana ogyahay. (Suuradda-Talaq 12:XNUMX).
Iyo suuradda An-Naba (Suuradda 78 – Bishaarada) waxay leedahay
Miyaannaan idinka dhisin Korkiinna Samo Todobo ah.
Ma aha in aan la yaabno markaa in waqtiga imaatinka Masih sidoo kale la siiyay toddobada, sida aan aragno hoos.
Sidaynu u baadhnay nebiyada waxaynu barannay in inkasta oo ay mararka qaarkood kala maqnaayeen boqollaal sano – si ay bani-aadmi ahaan isku dubaridi waayeen waxsii sheegyada midba midka kale – haddana waxsii sheegyadoodu waxay soo saareen mawduuc udub dhexaad u ah Masih soo socda.= Masiix). Anaga wuxuu arkay in nebi Ishacyaah (NNKH) uu isticmaalay calaamada laanta jirrid, ka dibna nebi Sakariyas (NNKH) wuu sii sheegay in tan Laanta waxay lahaan doontaa magaca Cibraaniga Yhowshuwa, kaas oo Giriiga ahaa Ciise, taas oo ah Ciise Ingiriisiga iyo Waa Carabi. Haa, magaca Masih (= Masiix) waxa la sii sheegay 500 oo sano ka hor Isa al Masih – Ciise (NNKH) – waligiis noolaa. Wax sii sheegiddan waxay ku qoran tahay kitaabka Yuhuudda, (ma aha injiilka), kaas oo weli la akhriyo oo la aqbalo – laakiin aan la fahmin – Yuhuuddu.
Hadda waxaan u nimid nebi Daanyeel (NNKH). Wuxuu ku noolaa masaafuristii Baabuloon wuxuuna ahaa sarkaal xoog badan oo ka tirsan dawladihii Baabiyloon iyo Faaris – iyo sidoo kale nebi. Jadwalka hoose wuxuu muujinayaa meeshuu Nebi Daanyeel (cs) ku noolaa taariikhda nebiyada.
Nebi Daanyeel iyo Nexemyaah ayaa lagu muujiyey wakhtiga ay la socdaan nebiyadii kale ee Sebuur
Kitaabkiisa, Nebi Daanyeel (NNKH), waxa uu farriin ka helay malag Jibriil (Jabriil). Daanyeel iyo Maryan, Ciise hooyadiis (Ciise – NNKH), waa kuwa keliya Kitaabka Quduuska ah oo dhan (al kitab) si aad u hesho fariimaha uu bixiyo Jibriil. Markaa waa in aan si gaar ah u dhugannaa fariintan. Malag Jibriil (Jabriil) wuxuu u sheegay in:
Jibriil … oo degdeg ah ayuu ii yimid oo markay ahayd wakhtigii allabariga. si ay xaqnimo weligeed ah u soo geliso, iyo in la shaabadeeyo muujinta iyo wax sii sheegidda, iyo in la subko kan ugu quduusan.
Bal ogow oo garo, tan iyo markii la soo saaray amarka in Yeruusaalem dib loo dhiso oo dib loo dhiso ilamaa Mid la subkay, taliyaha waa imanayaa, oo waxaa jiri doona toddoba ‘toddobo,’ iyo laba iyo lixdan’ toddoba. Waxaa lagu dhisi doonaa waddooyin iyo bohol, laakiin wakhtiga dhibaatada. Laba iyo lixdan ‘toddobo’ ka dib, kii la subkay waa la gooyn doonaa oo waxba ma yeelan doonaan. Oo dadka taliyaha iman doona waxay baabbi’in doonaan magaalada iyo meesha quduuska ah. Ugu dambaysta wuxuu u iman doonaa sida daad oo kale, oo dagaalkuna ilaa ugu dambaysta wuu sii jirayaa, oo baabba’na wuu soo baxay. ( Daanyeel 9:21-26 )
Waxaan aragnaa in tani ay tahay wax sii sheegidda imaatinka Kan la subkay (= Masiix = Masih sidaan aragnay. halkan). Malaa’ig Jibriil waxa uu bixiyay jadwal ku saabsan goorta Masihku imanayo. Jibriil waxa uu sheegay inay jiri doonto tirinta ka bilaabmi doonta ‘soo saarida amarka dib u soo celinta iyo dib u dhiska Yeruusaalem’. In kasta oo Daanyeel la siiyey farriintan (qiyaastii sannadkii 537 BC) ma uusan noolaan inuu arko bilowga tirintan.
Soo saarista amarka dib u soo celinta iyo dib u dhiska Yeruusaalem
Dhab ahaantii waxay ahayd Nexemyaah, kaas oo noolaa ku dhawaad ​​boqol sano ka dib Daanyeel (NNKH), kaas oo arkay bilawga tirintan. Wuxuu ahaa koob-qaadihii Boqorkii Faaris ee Artaxerxes oo sidaas ayuu ku noolaa Susa oo ku taal Iran maanta. Bal u fiirso markuu ku noolaa jadwalka sare. Waxa uu buuggiisa innoogu sheegay
Bishii Nisan ee sannaddii labaatanaad ee Boqor Artaxshasta, … boqorkii wuxuu igu yidhi, “Maxaad doonaysaa?”
Markaasaan Ilaaha samada baryay, oo waxaan boqorkii ugu jawaabay, Boqorow, haddaad ku faraxsan tahay, oo haddaad anoo addoonkaaga ah raalli ka tahay, ha ii diro magaalada Yahuudah oo ay awowayaashay ku xabaalaysan yihiin, si aan aniguna aan u helo aawadeed. dib u dhisi kara.…
Oo anna waxaan ku idhi, Waxaan warqad u haystaa Aasaaf oo kaynta boqorka dhawra, inuu ii dhiibo alwaax aan alwaax kaga sameeyo irdaha daarta macbudka ah, iyo derbiga magaalada, iyo meesha la deggan yahayba. waan qabsan doonaa? Oo gacantii Ilaahay oo nimcaysan baa kor igu saarnayd, sidaas daraaddeed boqorkii waa ii yeelay waxyaalihii aan weyddiistay. Markaasaan u tegey taliyayaashii Webi Yufraad, oo waxaan siiyey warqadihii boqorka.
Waan u tegey Yeruusaalem, … ( Nexemyaah 2:1-11 )
Tani waxay diiwaangelinaysaa ” soo saarista amar lagu soo celinayo oo dib loogu dhisayo Yeruusaalem” ee Daanyeel sii sheegay inay maalin uun iman doonto. Oo waxaynu aragnaa inay dhacday sannadkii 20aad ee Boqorkii Faaris ee Artaxerxes, kaas oo si fiican loogu yaqaanay taariikhda markuu bilaabay boqornimadiisa 465 BC. Sidaas darteed sannadkiisii ​​20aad waxa uu digreetadan ku soo rogi doonaa sanadka 444 BC. Jibriil waxa uu farriin u soo diray nebi Daanyeel (NNKH) oo wuxuu siiyey calaamad bilowga tirinta. Ku dhawaad ​​boqol sano ka dib, Imbaraadoorkii Faaris, isagoo aan ogayn wax sii sheegidda Daanyeel, ayaa soo saaray go’aankan – isagoo dhaqaajinaya tirinta la qoray wuxuu keenayaa Kan la subkay – Masih.
Farriinta Jibriil ee la siiyey nebi Daanyeel waxay muujisay inay qaadan doonto “toddobo ‘toddobo’ iyo laba iyo lixdan ‘toddobo'” ka dibna Masih ayaa la muujin doonaa. Haddaba waa maxay ‘Toddobo’? Tawrkii Nabi Muuse (NNKH) waxa ku jiray wareeg ah toddoba sannadood. Sannad kasta 7aad dhulku waa inuu ka nastaa beeraha si ay ciidda u buuxiso nafaqooyinka. Markaa ‘Todoba’ waa wareeg 7 sano ah. Anagoo taas niyadda ku hayna waxaynu aragnaa in laga bilaabo soo saarista wareegtada ay tirintu noqon doonto laba qaybood. Qaybta hore waxay ahayd ‘toddobo todoba’ ama toddoba xilli oo 7 sano ah. Tani, 7*7=49 sano, waxay ahayd waqtigii ay ku qaadatay dib-u-dhiska Yeruusaalem. Waxaa ku xigay laba iyo lixdan iyo todoba, markaa wadarta guud ee tirinta waxay noqotay 7*7 + 62*7 = 483 sano. Si kale haddii loo dhigo, laga bilaabo soo saarista amarkii Artaxshasta, waxaa jiri doona 483 sano ilaa Masih la muujiyo.
Waa inaan sameynaa hal habeyn yar oo kalandarka. Sida quruumo badan ay samayn jireen waagii hore, nebiyadu waxay isticmaaleen sannad dhererkiisu ahaa 360 maalmood. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo lagu qeexo dhererka ‘sanadka’ jadwalka. Midka galbeed (oo ku salaysan kacaanka cadceedda) dhererkiisu waa 365.24 maalmood, kan Muslimkuna waa 354 maalmood (oo ku salaysan wareegyada dayaxa), mid uu Daanyeel isticmaalayna waxa uu ahaa kala badh 360 maalmood. Markaa 483 ‘360-maalin’ sano waa 483*360/365.24 = 476 sano oo qorraxdu.
Imaanshiyaha Masih wuxuu saadaaliyay sanadka
Macluumaadkan waxaan ku xisaabin karnaa goorta Masihku iman lahaa. Waxaan ka bixi doonaa waagii ‘BC’ ilaa iyo ‘AD’ era oo waxaa jira kaliya 1 sano laga bilaabo 1BC – 1AD (There no ‘eber’ sano). Macluumaadka xisaabintan ayaa lagu soo koobay shaxda
Sannadka bilow 444 BC (20th sanadkii Artaxshasta)
Dhererka waqtiga 476 sano oo qorraxdu
Imaatinka la filayo in uu yimaado Western Calendar (-444 + 476 + 1) (‘+1’ sababtoo ah ma jiro 0 AD) = 33
sanadka la filayo 33 AD
Ciisihii reer Naasared wuxuu Yeruusaalem yimid isagoo fuushan dameer, taasoo noqotay dabaaldegii caanka ahaa Palm Axad. Oo maalintaas ayuu naftiisii ​​ku dhawaaqay oo wuxuu fuulay Yeruusaalem isagoo Masiix ah. Sannadku wuxuu ahaa 33 AD.
Nebi Daanyeel iyo Nexemyaah, in kastoo aysan is aqoon tan iyo markii ay noolaayeen 100 sano, haddana waxaa isku dubariday Eebbe si ay u helaan waxsii sheegyada oo ay dejiyaan tirinta muujin doonta Masih. Oo qiyaastii 570 sano ka dib markii nebi Daanyeel uu farriintiisa ka helay Jibriil, Ciise wuxuu Yeruusaalem u soo galay Masih. Taasi waa wax sii sheegid aad u cajiib ah iyo oofin dhab ah. Oo ay la socoto saadaasha oo ah magaca Masih ee uu u bixiyey nebi Sakariyas, Nabiyadani waxay sameeyaan koox saadaalin ah oo la yaab leh si ay dhammaan kuwa doonaya inay ogaadaan u arki karaan qorshaha Eebbe.
Laakiin haddii waxsii sheegyada Zabuur ay yihiin kuwo cajiib ah, oo ay ku qoran yihiin kitaabka Yuhuudda – ma aha Injiilka – maxay Yuhuuddu u aqbalin Ciise Masiix? Waxay ku jirtaa ay buug! Waa inay caddahay inaan u malaynayno, gaar ahaan saadaasha sida saxda ah iyo sida cajiibka ah loo fuliyay. Waa faham sababta Yuhuuddu ma aqbalaan Ciise inuu yahay Masih si aan uga barano waxyaabo kale oo cajiib ah oo ku saabsan imaatinka kan ay nebiyadu sii sheegeen. Waxaan ku eegeynaa su’aashan gudaha qormada xigta.